Hiran State - News: Wararkii ugu danbeeyey siyaasada labada Shariif iyo wasiiradii qurbaha ka tagay.
Wararkii ugu danbeeyey siyaasada labada Shariif iyo wasiiradii qurbaha ka tagay.
Mogdisho:Dad badan marka ay maqlaan isqabqabsiga labada Shariif lama yaabaan siiba marka laga hadlayo qurbajoogta Somaliyeed ee wadanka ka maqnaa mudada. laakinse waxey la yaaban yahiin aqoonyahanada qurbaha ka taga ee wadanka dib ugu laabta kana mid noqda dowladaha kumeel gaarka ah ee markasta wadanka loo soo dhiso iyo sida ay u kala fog tahay aqoonta lagu tilmaamayo shaqsiyaadkaasi sida iyagoo la leeyahay Dr, Prof iyo walii la mid ah. hadane markaad si fiican u dhuuxdo waxey ka sii liitaan shaqsiyaadkii aanba wadanka dibada ugu bixin mudadii ay socdeen dagaaladii sokeeye.
Labada Shariif habka ay siyaasada Somaliya ku soo galeen ka hadal ma leh laakinse bal walito yaa arkey aqoonyahanadii qurbaha ka tagay ee ku noolaa wadan ay nabadi ka jirto arkeyna heerka ay aduunyadu maanta mareyso iyo sida ay noqdaan marka ay wadanka dib ugu laabtaan wax leys barbar dhigi karo maahan. tan iyo waxii ka horeeyey xukumadii Farmaajo ee u badneyd qurbo joogta waxey dad badan u heysteen in wax badan isbedeli doonaan maadaama dalka dibadiisa ay ka yimaadeen aqoonyahano u badnaa kuwo ay wadanka ugu danbeysay xiligii aynu laheyn dowladii dhexe. halka ay intooda badana ku noolaayeen wadamo ay nabadi ka jirto.
Nasiib wanaag aqoonyahanadii sida ay dad badni qabaan ma noqon kuwo sidii la moodayey noqday waxeyna u bateen daneeysta yaal fikirkooda iyo howshooda ku koobay sidii ay wadanka ay shacabkiisu dhiban yahiin u dhici lahaayeen iyagoo ujeedadoodu tahay sidii ay dhaqso iskaka nadiifin lahaayeen guryo qurqurxan oo ay qurbaha ku leeyahiin taasi oo aaqirka iskaba daa iney dalka iyo dadka badbaadiyaane ay aduunyadii u sahleen in qofkasta oo Somaliyeed la isticmaali karo xitaa haduu aqoonyahan yahay.
Markaad dib u eegto xaruntii hore ee Villa Somaliya maantane ay dad yar ugu yeeraan Villa Ugandha waxaa kuu soo baxeysa in aqoonyahanada qurbaha ka tagay iyo dadkii aan wadanka ka bixin 20kii sano ee inadhaaftay ay macquul tahay in Somalinimo laga raadin karo kuwii aan wadanka ka bixin oo waxkasta oo ay sameeyaan ay u geysay aqoon la,aan iyo fowdadii ay mudada ku jireen. Laakinse wasiiradii qurbaha ka tagay wadanka heer aan caadi aheyn ayey gaarsiin doonaan sababtuna waa dhawrkaan qodob.
1- Waxey isku arkaan iney dadka ugu aqli badan yahiin.2- Ujeedada ay siyaasada u galeen maahan dal iyo dad badbaadiya ee waa sidii ay dantooda gaarka ah u heli lahaayeen taasi ayaana keentay in tiro wasiiro ah ay durbaba lunsadeen malaayiin dolar waqti gaaban inkasta oo ay arintaasi hada baaritaan ku socoto. 3- Xanuun kuma hayo wadankii ay qaarkood ka dhoofeen isagoo nabad ah hadase bur buray gabigii.
Inkasta oo aanu joojinay in aanu wax ka qorno labada shariif iyo baarlamanka waxii ka danbeeyey shirkii kampala hadane waa wadankeenii hooyo in markasta isha lagu hayo waa lama huraan, dhacdooyinkii ugu yaabka badnaa ee aanu soo aruurinay wey badan yahiin laakinse ma jirto shaqsiyaad ka damiir xun wasiiradii qurbaha ka tagay qaarkoodna waxaaba shaki ku jiraa ineyba ogyahiin in wadanku ay dadkiisu macaluul u dhimanayaan iyo in kale. mid ka mid ah wasiiradii qurbaha ka tagay mar la weydiiyey bal inuu dib ugu soo laaban doono siyaasada maadama Farmaajo shaqadii looga ceyriyey si aan horey loo maqal ayuu ku jawaabay sidan.
Aniga waxaanu isku school ahaan jirnay oo aanu aad iskugu fiican nahay Hodan Xaaska C/wali marka kuma jiro wasiirada ka walwalayo iney ku yimaadaan 4.5 iyo wax la mid ah. wasiirada fikirkaas aaminsan markii hore waxaanu u heysanay hal iyo labo laakinse ereyadaasi kuwo ka liito ayey wax ku raadinayaan oo aan xitaa u qalmin in la soo qoro.marka qaranimo Somaliyeed iney inoo muuqato iyo iney san inoo muuqan adigu bal isweydii hana la yaabin hab dhaqanka labada Shariif ee bal dhinaca kale wax ka eeg si aad u hesho macluumad dhinackasta leh.
Walee dalku haba bur buree Somali wey isbaratay.aqoonyahan, wadaad, qabqable, odaydhaqameed.
Sidoo kale magalada Mogdisho waxaa ka socda isku dhaxyaac baahsan oo markaad dhinackasta ka eegto u qotoma qabyaalad.sida in aan la kala garan cida ka talisa magaalada Mogdisho maadama ay idaacadahii ay ka hadlayaan cidkasta. sida Xildhibaano, Odoyaasha Hawiye, qabqablayashii Dagaalka, Ahalusuna iyo waliba Amison iyo Shabaab oo dhinac ah. bal waa yaabe maxaa siyaasad iyo goobtii shir wadatashi ah lagu qabanayo ka galay odoyasha hawiye? may hadii la casuumane ay shirka ku metelaan qabiiladooda hadii aan la casuumina ay la mid noqdaan odoyaasha Somaliyeed ee dalka intiisa kale ku nool?
la soco fowdada Soamliya ka taagan
· admin on July 19 2011 14:39:30 · 0 Comments · 1833 Reads ·
14,613,300 unique visits